IMathematika Izibalo ezichazayo
Enye yeenjongo zamanani-nxaxheba kukulungisa idatha ngendlela enentsingiselo. Iibhulafile zendlela ezimbini zibalulekileyo indlela yokuhlela uhlobo oluthile lweedatha ezibiniweyo . Njengoko ukwakhiwa kwamagrafu okanye itafile kwiimanani, kubaluleke kakhulu ukwazi iindidi zeziguquko esisebenza nazo. Ukuba sinesidingo esininzi, igrafu efana ne- histogram okanye i- stem kunye neqonga leqabunga kufuneka lisetyenziswe. Ukuba sineenkcukacha zedatha, igrafu yebar okanye ipati yeepeyi ifanelekile.
Xa sisebenzisana nedatha ebhaliweyo kufuneka siqaphele. I-scatterplot ikhona yedatha ephindeneyo yedatha, kodwa yeyiphi igrafu ekhoyo kwiedatha ezidibeneyo? Nanini na ukuba sinemizekelo emibini yamacandelo, ngoko kufuneka sisebenzise ietafile ezimbini.
Inkcazo yeTable Two Way
Okokuqala, siyakhumbula ukuba idatha yeenkcukacha zihambelana nempawu okanye kwiindidi. Akulinganisanga kwaye ayinayo imilinganiselo yamanani.
Itafile eendlela ezimbini zibandakanya ukubhala onke amaxabiso okanye amanqanaba eenguqu ezimbini. Zonke iimpawu zenye yezinto eziguquguqukileyo zidweliswe kwikholamu ecacileyo. Ixabiso lezinye iinguqulelo zibhalwe kunye nomgca ophezulu. Ukuba ukuguquguquka kokuqala kunemilinganiselo yeemitha kwaye isitshixo sesibini sinamanani, ngoko kuya kuba ne- int ye- ent entries etafileni. Ngolunye lwalezi zifaki zihambelana nexabiso elithile kwiintlobo ezimbini.
Ngomnye umqolo kunye kunye nekholamu nganye, ukungena kuhlanganisiwe.
Ezi zibalulekileyo zibalulekile xa kunqunyulwa ukusabalaliswa kwemida kunye nemimiselo. Ezi zibalo zibalulekile xa senza uvavanyo lwe-chi-square ukuzimela.
Umzekelo weTable Two Way
Ngokomzekelo, siya kuqwalasela imeko esibheke ngayo kwiinqanaba eziliqela zekholeji kwiyunivesiti.
Sifuna ukwakha itafile eendlela ezimbini ukucacisa ukuba yeyiphi iimeko ezingafaniyo, ukuba zikhona, ziphakathi kwamadoda kunye nabafazi kwikhosi. Ukufezekisa oku, sibala inani lebhasi ngalinye elifunyenwe ngamalungu ngokwesini.
Siyaqaphela ukuba uguquko oluthile lwezinto ezihlukeneyo lulobulili, kwaye kukho iimbali ezimbini ezikhoyo ekufundeni kwindoda neyesetyhini. Uhlobo lwesibini oluguquguqukayo luloluhlu lwamabhalana, kwaye kukho iinqununu ezintlanu ezinikezwa ngu-A, B, C, D kunye neF. Oku kuthetha ukuba siya kuba netafile ezimbini-ndlela kunye ne-2 x 5 = umgca owongezelelweyo kunye nekholamu eyongezelelweyo iya kufuneka ukuze ulandelele iinqumle zomgca kunye nekholomu.
Uphando lwethu lubonisa ukuba:
Amadoda ama-50 athola i-A, ngelixa ama-60 amabhinqa athola i-A.
Amadoda angama-60 athola iB, kwaye ama-80 amabhinqa athola iB.
Amadoda angama-100 athola i-C, kwaye ama-50 amabhinqa athola iC.
Amadoda angama-40 athola i-D, kunye nama-50 amabhinqa athola i-D.
Amadoda angama-30 athola i-F, kwaye amabhinqa angama-20 athola iF
Olu lwazi lufakwe kwitafile ezimbini zendlela engezantsi. Ubungakanani bomgca ngamnye usixelela ukuba zingaphi na uhlobo lodidi ngalunye lwafumana. I totali zekholwani zisitsho inani lamadoda kunye nenani labesifazane.
Kubaluleka kweTables Two Way
Amacwecwe amabini amabini anceda ukuhlela idatha yethu xa sinezigaba ezimbini.
Le tafile ingasetyenziselwa ukuthelekisa phakathi kwamaqela amabini ahlukeneyo kwi data yethu. Ngokomzekelo, sinokuqwalasela ukusebenza kweentlobo zabesilisa kwiikholeji zenkcazo ngokubhekiselele ekusebenzeni kwamabhinqa kwikhosi.
Emva kokudala itafile eendlela ezimbini, isinyathelo esilandelayo sinokuzihlalutya iinkcukacha zedatha. Singazibuza ukuba iimpawu ezikhoyo kwisifundo zizimeleyo okanye zingekho. Ukuphendula lo mbuzo singasebenzisa uvavanyo lwe-chi-square kwitafile ezimbini.
Itafula ezimbini-Indlela yeBakala kunye neGenders
Umntu Ibhinqa Iyonke
A 50 60 110
B 60 80 140
C 100 50 150
Iyonke 280 260 540
Ukuqonda iiQanethi: Iinkcazo kunye neZisebenzisi
Ziziphi iindawo zokuhlala?